Shir Albaabada u xiran yihiin oo u furmay Madaxda DF iyo M/Goboleedyada | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Shir Albaabada u xiran yihiin oo u furmay Madaxda DF iyo M/Goboleedyada
Shir Albaabada u xiran yihiin oo u furmay Madaxda DF iyo M/Goboleedyada
Shirka Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkoodu dhammaaday iyo kuwa maamul Goboleedyada ayaa goor dhow waxaa uu ka furmay Teendhada Afisyooni ee xeyndaabka Xarada Xalane ee Magaalada Muqdisho.
Shirkaan oo ah mid Albaabada u xiran yihiin ayaa waxaa ka qeyb galaya Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Rooble, dhammaan Madaxweyneyaasha maamul Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Shirkaan ayaa waxaa uu hordhac u yahay Shirka Wadatashiga Qaranka ee doorashooyinka dalka ayaa waxaa Maanta looga hadlayaa Ajendayaasha Shirkaas, waxaana Shirkaan soo qaban-qaabisay Beesha Caalamka.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ayaa markii u horeysay hor-fariistay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Rooble, kaddib saddex todobaad oo Muqdisho ku sugnaayeen.
Shirka maanta ayaa la filayaa in looga heshiiyo ajandaha shirka soo socdo, is fahamka shirkan hordhaca ah laga gaaro ayay ku xiran tahay jawiga uu ku furmi doono shirka rasmiga ah, xili Beesha Caalamka ay cadaadis saartay dhinacyada.
Maqaal horeTaliska CXD oo ka hadlay weerarkii Al-shabaab ee Bariire iyo Awdheegle
Maqaal XigaPuntland oo Caddeyn ka dalbatay hadal kasoo yeeray Dowladda Federaalka